I-Pramiracetam powder (68497-62-1) hplc = 98% | Yenza ama-Nootropics ahlinzeke
/ Imikhiqizo / I-Nootropics powder / Pramiracetam powder
SKU: 68497-62-1. Isigaba: I-Nootropics powder
I-AASraw inokukwazi ukuhlanganisa kanye nokukwazi ukukhiqiza kusuka kugramu kuya ku-mass order ye-Pramiracetam powder (68497-62-1), ngaphansi komthethonqubo we-CGMP kanye nesistimu yokulawula ikhwalithi.
I-Pramiracetam powder is derivative derivative derivative ngenhloso yokuthuthukiswa kwengqondo, kanye nobufakazi bokuqala ukusekela ukusetshenziswa kwayo ekusizeni ukubunjwa kwengqondo yesikhathi eside. Yize izindlela zingaziwa nhlobo, zingase zithuthukise ukuhlanganiswa kwe-acetylcholine.
Ividiyo ye-Pramiracetam powder
Ama-Raw Pramiracetam ama-powder ayisisekelo
Igama: I-Pramiracetam powder
Formula Yamamolekhula: C14H27N3O2
Isisindo somzimba: 269.38
I-Melt Point: I-45.0-49.0 ° C
I-Pramiracetam powder emifushane emjikelezweni wezidakamizwa ze-SMART
I-Coluracetam (i-MKC-231) yisidakamizwa se-racetam okuthiwa yisidakamizwa esithuthukisa ukuqonda. Iyakwazi ukulondoloza ukungena kwe-neurons uma kungenakukhubazeka, kodwa okwamanje abukho ubufakazi bokusebenza kwemiphumela ye-nootropic.
Ukusetshenziswa okukhulu kwePramiracetam powder
Njengamanje, ubufakazi obusebenzisa i-Pramiracetam powder kubantu basebenzisa i-400mg kathathu nsuku zonke noma i-600mg kabili ngosuku; Zombili lezi zimiso zokulinda zihlanganisa i-1,200mg ye-Pramiracetam powder nsuku zonke.
Akuqinisekisiwe ukuthi i-Pramiracetam powder kufanele ithathwe ngokudla, futhi akucaci ukuthi i-1,200mg yisilinganiso esihle noma cha. Lokhu kwenza, kodwa, kubonakala kusebenza kahle.
Yiziphi izinhlobo zeZingxenye okufanele Ngilindele kusuka ku-Raw Pramiracetam powder
I-Pramiracetam powder yenza ngcono ukusebenza kobuchopho futhi inikeza ukuthuthukiswa okungaqondakali kwengqondo, ikakhulukazi mayelana nokubunjwa kwememori nokubuyiswa.
Ngoba kaningi kudala umuzwa wokugxila okubonakalayo kanye nenani elithile lokugxila ngokomzwelo, ngokuvamile lifaniswa noRitalin. Ezinye zezinzuzo ezihlonishwa kakhulu kunazo zonke zePramiracetam powder zimi kanje:
Imemori Ethuthukisiwe - Ngenxa yokuthi ivuselela i-hippocampus, ingxenye yobuchopho ngokuyinhloko ibhekene nokudala izinkumbulo ezintsha, i-Pramiracetam eluhlaza powder iyaziwa njengamandla okukhumbuza inkumbulo. Iningi labasebenzisi babika ukuthuthukiswa okuphawulekayo ekubunjweni kwememori kanye nesivinini sokukhumbula, isimangalo esiye sabambisana nezifundo zesilwane.
Ukwandiswa Kwamandla Okufunda - Abasebenzisi babika ukuthi i-Pramiracetam powder yenza ukufunda ngokushesha, kulula, futhi kujabulise. Lokhu kungachazwa okungenani ngokuyingxenye nguPramiracetam powder ukugqugquzela ukwelapha okukhulu kwe-neuroplasticity.
Ukuqapha Kwengqondo Nokucabangela - Abasebenzisi ngokuvamile bathi ukuthatha i-Pramiracetam powder kubanika imizwa eqinile yokuqapha kwengqondo, ukugxila, ukubunjwa kwemicabango ngokushesha, nokucabanga okucacile.
Ukuziqhenya komphakathi - Abasebenzisi abaningi bathi ukuthatha i-Pramiracetam eluhlaza powder kubasiza ukuba bajabulele futhi bahlanganyele ngokugcwele ezimweni zomphakathi, inzuzo okungenzeka ihlobaniswe nokusebenza komqondo ophelele wobungcweti kodwa ingaba nemiphumela ethile ehlobene nemiphumela yayo yokuhlushwa ngokomzwelo, enganciphisa inhlalo ukukhathazeka.
Ukubukwa Okubukekayo Okuthuthukisiwe - Abasebenzisi bavame ukubika imiqondo ephuthumayo noma eyathuthukisiwe, kufaka phakathi umsindo ozwakalayo ocebile futhi ocacile futhi ocacile obonayo ngokubukeka kombala omkhulu.
Ukulungisa Imemori - Ekulinganisweni okulinganiselwe kwemithi, i-Pramiracetam powder iboniswe ukuthi iyindlela yokwelapha ephumelelayo yokulahlekelwa inkumbulo kanye nezinye izinkinga zokucatshangelwa ezibangelwa ukulimala kwengqondo. Kungenye ye-nootropics ehlukahlukene ehlolwe e-US njengendlela yokwelashwa kwememori yokulahleka okuhlobene nesifo se-Alzheimer nezinye izinkinga zezinzwa. Ucwaningo olulodwa luye lwabonisa ukuthi lungakwazi ukuguqula amnesia okwenziwe ngamakhemikhali kumavolontiya anempilo kusukela ku-18-65 eneminyaka yobudala.
Yeka ukuthi i-Pramiracetam powder esebenza kanjani
Njengama-nootropics amaningi, i-Pramiracetam powder ithinta ukukhululwa kwama-neurotransmitters, amakhemikhali ebuchopho abathumela amasignali kusuka kwesinye isisindo sezinzwa kuya kwesinye. Kodwa i-Pramiracetam powder yenza ngokungaqondile, ngendlela ehluke kakhulu kwizenzo ezijwayelekile ze-supplement racetam, futhi ivuselela ubuchopho ngezinye izindlela.
Ngokungafani ne-piracetam, i-Noopept, namanye ama-nootropics amaningi athandwayo, i-Pramiracetam i-powder eluhlaza i-fat e-soluble kune-soluble yamanzi, okusho ukuthi ifakwe emanzini nge-fatty acids. Ifinyelela ekugxilweni okuphezulu nokuphakama okusheshayo ngokusheshayo, ngokujwayelekile ngaphakathi kwemizuzu ye-30, futhi inomzuzu wokuphila okude okwesikhashana wamahora we-4-6.
Iningi lezinhlanga lisebenza ngokugqugquzela ngokuqondile izingosi ezithile ze-receptor ze-neurotransmitter futhi ngaleyo ndlela zikhuphula ukukhiqizwa nokukhululwa kwezinzwa ezithile ze-neurotransmitters, kodwa i-Pramiracetam powder ayibangeli ngokuqondile ukuguquka kwamazinga we-neurochemical, futhi akubonakali ukuthi ihlangene nanoma iyiphi i-neurotransmitter enkulu.
Isenzo saso esiyinhloko esiyizinyathelo eziyinhloko ukwanda okwenyuka ekuhloliseni okuphezulu kwamakhemikhali ku-hippocampus, ingxenye yobuchopho ebaluleke kakhulu ekwakheni izinkumbulo zesikhathi eside.
U-Choline uyisandulela se-acetylcholine, i-neurotransmitter ehileleke ngokujulile ekucubunguleni izinqubo ezihlanganisa ijubane lokufunda, inkumbulo, nokuhlushwa.
Ngokugqugquzela ukutholakala kwe-choline, i-Pramiracetam i-powder eluhlaza iqondisa ngokukhululekile ukukhululwa kwe-acetylcholine futhi ikhuthaza umsebenzi okwandisiwe ku-hippocampus. Ngenxa yokuthi le ngxenye yobuchopho iyadingeka emisebenzini yememori, ukugqugquzela okuvamile ukuthi i-Pramiracetam powder kudala kungathuthukisa kokubili ukubunjwa kwezinkumbulo ezintsha nokugcinwa kwezinkomba noma izinkumbulo zesikhathi eside. Umsebenzi okwandisiwe ku-hippocampus wandisa futhi ukugeleza kwegazi, okwenza uqaphile futhi kuthuthukiswe amakhono okuqonda.
I-Pramiracetam i-powder eluhlaza ingaba nezinye izindlela zokusebenza. Abacwaningi baye bacabanga ukuthi ngaphezu kokusebenza kwayo ebuchosheni, i-Pramiracetam powder yenza ezindaweni ezingenawo obala ngaphandle kobuchopho obuncike emaceleni e-adrenal. Ucwaningo lwezilwane lubonisa ukuthi i-Pramiracetam powder ingakhuphula noma ibuyiselwe ubuchopho be-membrane fluidity, okusiza ukufaka uphawu lweseli.
Ngokungafani namanye ama-nootropics amaningi amakilasi we-racetam, i-Pramiracetam i-powder eluhlaza ayibonakali ukuthi ingashintsha ngentshiseko isimo sokuvuka noma isimo somzwelo. Lokhu kungachazwa ngethonya elilinganiselwe lePramiracetam powder ekukhiqizeni nasekukhululweni kwama-neurotransmitters anethonya elikhulu emazingeni e-mood and anxiety njenge serotonin, i-GABA, ne-dopamine.
I-Pramiracetam powder ingenye ye-nootropics ezithakazelisayo kunazo zonke ezitholakalayo, zinikeza amandla amakhulu kunazo zonke zezingxenye ze-racetam-class.
Isenzo salo esiyingqayizivele senza umsebenzi wobuchopho uthuthuke, ukukhumbuza inkumbulo, ikhono lokufunda, ukugxila, ngisho nokubona okubonayo.
Isebenza kahle ngokwayo futhi ingaba yinto eyigugu kakhulu kwezinye izaziso ze-nootropics, ezithuthukisa futhi zandisa imiphumela yazo.
Ngokushesha uba intandokazi nabafundi, abalobi, nanoma ubani onentshisekelo ekwandiseni amakhono abo engqondo, iPramiracetam powder intsha kubantu abaningi kodwa iqala ukuthola ukuqashelwa kahle njenge-nootropic evelele.
I-Pramiracetam powder iyisakhi esakhiwe nge-piracetam, esitholwe futhi yasungulwa yiParke-Davis kuma-1970s. Kuyinto yokwengeza okunamandla, okulinganisiwe ukuthi iphuma ku-5-30x kakhulu kunamandla we-piracetam.
Ithengiswa eYurophu ngaphansi kwamagama okuthiwa i-Neupramir, i-Pramistar, ne-Remen futhi inqunywe lapha ukuze ukwelashwa kwe-dyslexia, i-ADHD, izinkinga zemicabango nokukhumbula imo ezibangelwa isifo se-Alzheimer nezinye izimo ze-neurological.
Kwakuvunyelwe i-US ku-1979 kodwa ayivunyelwe yi-USFDA nganoma yikuphi ukusetshenziswa okuthile. Kodwa-ke, kuye kwacwaningwa ngokujulile njengendlela yokwelapha izinkinga zengqondo nokulahleka kwememori okuhlobene nesifo se-Alzheimer kanye nokulimala komqondo. Kubuye kufundwe njengendlela yokwelashwa kwezimo ezihlukahlukene zesisindo sezinzwa eziphakathi.
I-Pramiracetam Raw Powder
I-Pramiracetam Raw Powder Recipes
Ukumaketha okukhulu kwe-Pramiracetam powder
Ingabe i-Pramiracetam i-Rawrutam enomdlandla inayo yonke imiphumela emibi
I-Pramiracetam powder ivame ukubekezelelana kahle ngisho nasezilinganisweni eziphakeme, futhi imbalwa emiphumeleni emibi iye yabhalwa.
Umthelela ovame ukubikwa yi-headache, okungavinjelwa ukuwuthatha nge-supplement ye-choline.
Imiphumela emibi engavamile, kuhlanganise nokucindezeleka kwamathumbu kanye nemizwa yokukhathazeka noma ukukhathazeka, ngokuvamile ihlotshaniswa nesilinganiso esiphezulu futhi ngakho-ke ingagwenywa ngokunciphisa umthamo.
I-Pramiracetam powder ayiyona umlutha, futhi akukho nemiphumela emibi ebalulekile yokusetshenziswa kwesikhathi eside okuye kwabhalwa. Eqinisweni, kunobunye ubufakazi bokuthi lesi sengezo singase sithuthukise impilo yezobuchopho futhi ngandlela-thile sibuyisele ukusebenza ekubuchosheni.
Indlela yokuthenga i-Pramiracetam powder kusuka ku-AASraw
I-68497-62-1 I-Pramiracetam powder I-HASM ye-HNMR
I-Nootropic Pramiracetam powder: izinzuzo, isilinganiso, imiphumela emibi
I-N-Methyl-D-aspartic acid (NMDA) powder